User so-0, User m2-N, User ca-N,
Is ka warran, magacayga waa Josep Maria Roca Peña oo waxaan ahay 25 sano jir.
Waxaan ku dhashay oo aan ku noolahay Barcelona, Catalonia, waan ahay Catalan; Oo waxaan jeclahay madaxabannaanida Catalonia. Anigu waan hadla Catalan, Isbaanish iyo sidoo kale Portucis, maxaa yeelay, waxaan ku noolan jiray Portugal. Waxa aan jeclahay in saddex tusale: Star Trek, Code Lyoko iyo Winx Club, oo waxaan wikis taxanaha, kuwaas oo luqado badan.
Haddii aad doonaysaan inaan turjumaad ama hagaajis af , ,
, fariin i dhig wadata codsigaaga, waan kuu samayn donaa. Ah fadlan riix halkan (wadahadalkeyga).
Laakiin waxaan la hadlayaa:
Macluumaadka xiriirka Edit
Retrieved from "https://community.fandom.com/wiki/User:Josep_Maria_Roca_Pe%C3%B1a/so?oldid=2959131"